Ị nọ ebe a : >lọ>Product>Prefabricated envelopu obubọk
Model Number: Prefabricated envelopu obubọk
Site na mmepe nke teknụzụ mmepụta ihe ọgbara ọhụrụ, enwere ike ịme ụlọ ụlọ na bat dị ka mmepụta igwe. Ọ bụrụhaala na ebula ihe ndị dị na mbụ ụlọ na - ebuga ebe a na - ewu ụlọ ma gbakọta.
Flọ ndị a na-ahụ maka ụlọ bidoro kpaliri mmasị ndị mmadụ na mmalite narị afọ nke 20 ma mechaa mezuo na 1960s. Britain, France, Soviet Union na mba ndị ọzọ mere nchụso nke mbụ. N'ihi ọsọ ọsọ a na-ewu ngwa ngwa na ọnụ ala mmepụta nke ụlọ ndị a kpụrụ akpụ, ha na-ebijupụta ụwa niile ngwa ngwa.
Ọdịdị ụlọ ndị mbụ rụrụ arụ rụrụ arụ ma sie ike. Mgbe e mechara, ndị mmadụ merewanye nhazi, na-emewanye mgbanwe na iche iche, ka ewee nwee ike wulite ụlọ ndị mepere emepe ọ bụghị naanị n'ụdị, kamakwa n'ụdị n'ụba.
I. Ọrụ na uru nke GRC zukọtara ụlọ Nlekọta nke mpụga
Enwere ike iche ngwaahịa ngwaahịa GRC na ịkpụzi, ọdịdị, agba, ụdị, wdg.
1. Ihe nchekwa dị n'akụkụ gụnyere: mpụga mgbidi, elu ụlọ, windo akụkụ, ọnụ ụzọ, wdg.
2. A na-eji ihe owuwu eme ihe maka ijikọ ihe ndozi na mpụga ihu na ikpo ọkụ iji guzogide ifufe na mmiri ozuzo, mgbanwe ihu igwe, ụzarị anyanwụ, wdg.
3. Ọrụ: O nwere njirimara nke ichedo ọkụ, mkpuchi ọkụ, ihe mkpuchi mmiri, njikwa mmiri, nkwụsi ọkụ, ịdịte aka, nhicha onwe ya, wdg.
4. Enwere ike ekewa ya n'ime otu ihe ndozi na otu mmiri.
5. Enwere ike ekewa ya n’ime sistemụ na-arụ otu ihe na sisitemu na-arụ ọrụ nke ukwuu. Igwe dị n’etiti bụ akwa nchekwa, etiti na-eji ihe eji echekwa mmiri, wee kpuchie elu ya.
6. Igwe ọ bụla na-eji ọkpụkpụ dị ka ihe na-akwado ya ma ọ bụ nke na-enye nchebe nke ime dị ka ihe na-akwado ya;
Ọrụ dị iche iche na uru nke ụlọ ndị a rụrụ n'ụlọ akwụkwọ GRC bụ:
(1) Ihe osise di iche.
Ka ọ dị ugbu a, atụmatụ a na-ebi n'ime ụlọ anaghị emetụ maka ụlọ, yana ọtụtụ mgbidi na-ebu ibu, obere oghere, nkewa nwụrụ anwụ, na enweghị ike idozi oghere dị n'ime ụlọ ahụ ngwa ngwa. Agbanyeghị, enwere ike ekewa ụlọ ndị buru ibu ụzọ n’ime obere ụlọ dị na nnukwu ọnụ ụlọ ma ọ bụ nnukwu ụlọ n’ime obere ụlọ nzukọ dịka mkpa ndị bi na ha siri dị. Otu nsogbu kachasị nke nnukwu ụlọ ndị na-agbanwe agbanwe na ụlọ obibi bụ inwe mgbidi akụkụ ọkụ dị kwekọrọ. GRC, GRG, GRP na ihe ndị ọzọ dị ọhụrụ bụ kpọmkwem ihe kachasị mma maka ogwe ndị dị na mpụga, mgbidi nkebi, mgbidi ndị amachiri na ịchọ mma nke ime ụlọ.
(2) Ngagharị ọhụụ
PC-GRC ụlọ rụrụ arụ nwere ọrụ ndị a:
1. Nchedo gburugburu ebe obibi na mmetọ ọ bụla. Mgbidi ahụ nwere ọrụ nhicha onwe ya na nhicha ikuku.
2. Mgbidi na-echekwa ike dị elu nwere ihe mkpuchi ikuku iji mee ka ikpo ọkụ dịkwuo elu ma belata ike ikuku ikuku na ọkọchị;
3. Ikwusi ụda na-eme ka ọrụ mgbochi nke mgbidi na ibo ụzọ na windo arụ ọrụ. Ihe mkpuchi ikuku na-arụ ọrụ nwere njigide ụda, ka ha wee nye ebe dị jụụ n'ime ụlọ ahụ ma zere mmachi nke ụzụ mpụga.
4. Mkpuchi ọkụ na njigide ọkụ iji gbochie mgbasa ma ọ bụ mgbasa nke ọkụ;
5. Mwepu nke Aseismic nke iwuli ọria elu na mmụba nke njikọta agbanwe agbanwe;
6. Ọdịdị mara mma anaghị achọ okomoko, mana facade ahụ doro anya ma pụọ ​​iche, ọ gaghị agbaji, nrụrụ ma ọ bụ gwụ mgbe ejiri ogologo oge.
7. expdị mma dị mma na-enye ọnọdụ dị mma maka kichin na ụlọ mposi ka enwee ihe ndobe dị iche iche;
8. Ikike dị mma iji bulie ohere nke ịmepụta ngwa eletriki ọhụụ, akụrụngwa nkwukọrịta, akụrụngwa na-echekwa ike, wdg
(3) ụlọ ọrụ na-emepụta ihe
O siri ezigbo ike na mpụga elu nke ụlọ ọdịnala imepụta usoro dị iche iche mara mma dabere na wuru saịtị, na agba agba ahụ agaghị egosipụta ọdịiche dị na agba ahụ agaghị agacha ogologo oge. Agbanyeghị, ihe owuwu ụlọ nke GRC rụrụ arụ nwere ike ime nke a site na iji mkpụkọ, ịgba mmiri, nanotechnology, teknụzụ igwe na teknụzụ ndị ọzọ. Ihe eji akpo komputa zuru oke site na PC-GRC mkpuchi ihe; A na-eji usoro eji arụ ọrụ, ugba nchara, ihe dị iche iche nke igwe na njikọta niile bụ ndị mepụtara n'ụzọ ziri ezi. A na-amụnye ala ụlọ na ebe a na-ahụ maka ebe dị iche iche maka ụlọ. Enwere ike imepụta ihe n'ime ụlọ dịka osisi gpsum, ihe mkpuchi ala, mbadamba elu ụlọ na ihe ndị yiri ha nwere ike imepụta site na ahịrị nrụpụta siri ike. Na mgbakwunye, na usoro mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ, enwere ike ịchịkwa ntanetịpụta arụmọrụ nke ihe ndị ahụ dịka ike, nkwụghachi ọkụ, nzere mmiri, nguzogide mmiri, ịchekwa ụda na ichebe ọkụ n'oge ọ bụla.
A na-ele ụlọ ahụ anya dị ka nnukwu akụrụngwa, ma ụlọ PC-GRC ọgbara ọhụrụ bụ ihe ndị mejupụtara n’ọrụ a. Enwere ike inwe mmesi obi ike na akụkụ a dị mma site na imepụta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ siri ike, ụlọ ezukọtara nwere ike mezuo ihe achọrọ arụ ọrụ.
(4) mgbakọ ọgbakọ
Ebe ọ bụ na mkpa nke onwe PC nke PC-GRC gbakọtara ọnụ belata ọkara jiri ya tụnyere nke ụlọ ọdịnala, a na-eme ka ntọala ahụ dị mfe. Mgbe enyechara ụlọ ọrụ ahụ prefabricated ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ebe ahụ na-ezukọta ha dị ka eserese ndị ahụ. Nnukwu mmiri mgbochi mmiri dị ka apịtị, plasta na ụlọ mgbidi agaghịzi apụta na saịtị ahụ. Mwube nzukọ PC-GRC nwere uru ndị a:
1. Enwere ọganihu ngwa ngwa, enwere ike iwepụta ya na obere oge;
2. A na-ebelata ọrụ aka, ma ịgafe ya dịkwa mma;
3. Usoro ọ bụla na-arụ ọrụ nwere ike ịlele izizi dịka ntinye akụrụngwa iji hụ na ogo ahụ;
4. Ebe a na-ewu ụlọ nwere mkpọtụ dị ala, obere akụrụngwa yana obere nsị na mbufu mmiri, nke bara uru na nchedo gburugburu;
5. Etu na-akwụ ụgwọ ihe owuwu ahụ.